Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.5.4 Yenza ndothuka
Kaloku ukuba unabantu abasebenzisanayo kunye neengxaki zenzululwazi enentsingiselo, kwaye ugxininise ekujoliswe kuyo apho ingaba yinto ebaluleke kakhulu, qiniseka ukuba ushiye indawo ukuze bakumangalise. Kuyinto epholile ukuba izazinzulu zommandla zibhalise iigalaxi kwiGalaxy Zoo kunye nama-proteins aqhotyoshelwe eFoldit. Kodwa, ke, yilezi ziiprojekthi eziye zenzelwe ukwenzela. Yintoni eyimangalisa ngakumbi, kwimbono yam, kukuba ezi ndawo zivelise iziphumo zenzululwazi ezingenakulindelwa ngisho nabadali babo. Ngokomzekelo, uluntu lwaseGalaxy Zoo lufumene iklasi entsha yezinto zeenkwenkwezi ezazibiza ngokuba yi "Green Peas."
Ngaphambili kakhulu kwiprojekthi yeGalaxy Zoo, abantu abambalwa babone izinto ezingavamile eziluhlaza, kodwa inzala kubo yayikhanyiswa xa uHanny van Arkel, umfundisi wesikolo saseDatshi, eqala umgca kwi-forum yeGalaxy Zoo ngongoma othi: "Nika i-Peas Ikhefu. "Umtya, owaqala ngo-Agasti 12, 2007, waqala ngamahlaya:" Ngaba uyawaqokelela ukuze udle ?, "" Ikhefu lokuma, "njalo njalo. Kodwa ngokukhawuleza, amanye amaZoo aqala ukuthumela ii-peas zawo. Ngethuba lexesha izithuba zaba ngakumbi kwezobugcisa kwaye zicaciswe, de kube izikhundla ezinjengalezi zaqala ukubonisa: "I-OIII line ('ipea' line, kwi-5007 angstrom) ukuba ulandela ukutshintshela ekubomvu njengoko \_(z\_) kwanda kwaye iyalala kwi-infra-red ngo- \_(z = 0.5\_) , oko kukuthi akabonakali " (Nielsen 2012) .
Emva kwexesha, i-Zooites yayiqonda ngokuthe ngcembe kwaye iququzelele ukubonwa kwayo kweeperasi. Ekugqibeleni, ngoJulayi 8, 2008-phantse unyaka ozayo emva kwayo-uCarolin Cardamone, umfundi we-astrology graduate kuYale kunye nelungu leqela leGalaxy Zoo, wajoyina intambo ekuncedeni ukuququzelela "i-Pea Hunt." Umsebenzi okhuselekileyo wenziwa ngo-Julayi 9, 2009 iphepha lipapashwe kwiiNkcazo zeNyanga zeRoyal Astronomical Society enegama elithi "Galaxy Zoo Green Peas: Ukufumaniswa kweKlasi yeCompact Extremely--mingming Galaxies" (Cardamone et al. 2009) . Kodwa inzala kwiipayi ayizange iphele apho. Emva koko, baye baqhutyelwa uphando olongezelelweyo ngabafundi beenkwenkwezi ngehlabathi (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Emva koko, ngo-2016, ngaphantsi kweminyaka eyi-10 emva kweposi yokuqala nge-Zooite, iphepha elipapashwe kwiNdalo ephakanyisiweyo i-Green Peas njengenkcazelo enokwenzeka malunga nomzekelo obalulekileyo kunye nephazamisayo kwi-ionization yendalo yonke. Akukho nanye yale nto eyayicinga ukuba uKevin Schawinski noChris Lintott baxoxe ngeGalaxy Zoo kuqala kwindawo yokushicilela e-Oxford. Ngethamsanqa, i-Galaxy Zoo yenze le ntlobo yeziganeko ezingamangelanga ngokuvumela abachaphazelekayo ukuba bathethelane.